FAQ - Shanghai Gianty Trading Co., Ltd.
1. Inona no zavatra vita amin'ny famenonao feno? Azo antoka ve ity akora ity？
Izy io dia biopolymer namboarina avy amin'ny asidra polylactic (PLA) izay azo avy amin'ny zavamaniry starchy toy ny katsaka, ovy ary siramamy. Ity fitaovana ity dia BPA maimaimpoana ary nekena ny fiarovana ny FDA. Maromaro ny fanamarinana momba ny compostability sy fiarovana azo omena.
2. Nahoana ny vokatra PLA no maharitra?
PLA dia vita amin'ny zavamaniry izay havaozina isan-taona. Ny vokatra PLA dia mety ho feno tanteraka amin'ny tranobe fametrahana mpivarotra. Na izany aza dia azo atao esorina amin'ny fomba fitantanana fako mahazatra hafa koa toy ny fako-tany.
3. Azoko apetraka ao anaty valan'orona ihany koa ny vokatrao?
Manoro hevitra izahay ny hametraka ny vokatra PLA ao amin'ny tranoben'ny famokarana indostrialy izay hamadika azy ireo ho lasa compost ary ny fihodinana amin'ny tany. Tsy avela hampiasaina amin'ny fanamboarana ny tokontany noho ny tsy fahampian'ny mari-pana sy ny toetry ny hamandoana tsy miovaova.
4. Ahoana no hanamarinana ireo vokatra miangona?
Ny entana azo ampitahaina dia mifanaraka amin'ny fenitra ASTM ho an'ny compostability. Voamarina izy ireo mba hahitana ireo fenitra ireo avy amin'ny Biodegradable Products Institute (BPI) izay mampiasa fenitra mifototra amin'ny siantifika mba hamaritana raha azo atao kompy anaty vokatra ara-barotra ny vokatra iray. Tsy afaka mirakitra ny logo BPI ny vokatra raha tsy nohamarinina tamim-pomba ofisialy izany. Ka tadiavo ireo teny hoe "BPI Certified" ary afaka matoky ianao fa hihena ny vokatrao ao anaty trano ara-barotra.
5.Ny vokatra ampiasaina amin'ny trano fisakafoanana ve ny vokatrao?
Eny. Ny vokatra CPLA dia novolavolaina miaraka amin'ny adidy mavesatra ary ny fandeferana amin'ny hafanana avo. Ohatra, ny kitapitsinay dia mamela ny manapaka ny sakafo mafy toa ny hena na ny “crème scooping”.
6. Mahavita zavatra ve isika rehefa misy vokatra azo avy amin'ny famonon-tany?
Eny. Ny tombony azo amin'ny fampiasana fitaovana vita amin'ny zavamaniry azo havaozina tanteraka dia tena misy na dia tsy afaka mandrafitra azy ireo amin'ny tranom-barotra aza ianao. Ireo tombony ireo, raha oharina amin'ny plastika nentim-paharazana, dia ny entona maintso ary mihena ny fanjifana loharanom-angovo amin'ny fanamboarana azy ireo.
7. Azo zahana ve ny vokatrao ao anatin'ny fotoana fohy?
Eny. Ny santionany amin'ny fitsapana mahazatra matetika dia mivoaka amin'ny 6 andro. Noho ny fananantsika orinasa famolavolana azy manokana dia tsy maharitra afa-tsy 35 andro ny famolavolana bobongolo ary ny famolavolana bobongolo.
8. Ahoana no fandraisana anjara amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Gianty?
Raha liana amin'ny vokatra avy any Gianty ianao, faly dia afaka manome modely azo atao amin'ny orinasa sy ny famatsiana vahaolana ho an'ny famokarana entana. Ohatra, ny BIONEO marika miaraka amina fivarotana sy fivarotana sakafo fisakafoanana azo ampiasaina indray dia mety amin'ny orinasa E-commence.
9. Misy safidy ve ny fitaterana haingana ho an'ny firenena eoropeana?
Eny. Hunan-Europe Railway iraisam-pirenena, lalamby 10000 km miampy lalana avy amin'ny orinasa Hunan mankany Eropa. Via ity lalamby vaovao ity, maharitra 10-12 andro eo ho eo ny fanaterana entana ao amin'ny Hunan China mankany amin'ny firenena eoropeana, mihoatra ny 20 andro noho ny fandefasana ranomasina avy any amin'ny seranan-tsambo sinoa.
10. Misy vintana ve ny hanomezana lanja ny vola Gianty?
Eny. Misokatra be isika mba hahazoana tolotra amin'ny fampiasam-bola avy amin'ireo mpiara-miasa mety manerantany. Izahay dia manolo-tena hahasarika mpandray anjara bebe kokoa ho an'ny indostrian'ny birao fisakafoanana ara-tontolo iainana manerantany.